Dhaqaale – Wargeyska Waxgarad
Home / Dhaqaale
Dalku deyn hor leh uma baahna
August 31, 2018	Aragti, Dhaqaale 1
Bartamihii 1980’kii, Dawladdii Dhexe ee Soomaaliya lacago deyn ah ayay ka soo amaahatay dalal shisheeye iyo hay’ado kala duwan, sida Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF) iyo Bangiga Adduunka (World Bank). Inta badan lacagtaas waxay dawladdii kacaanku ku bixisay qalab ciidan (military hardware) iyo mashariic kale. Qadarka lacagta deynta ah ma badnayn …
Dagaalka dhaqaale ee ka dhanka ah Turkiga
August 22, 2018	Dhaqaale 0
Dagaal dhaqaale oo saf ballaaran ayuu Maraykanku ku soo qaaday dunida inteeda kale. Dagaalkan wuxuu si ba’an u saameeyey dhaqaalaha Turkiga waxaana hoos-u-dhac aad u weyn ku yimid Liiraha Turkiga. Toddobaadkii hore, warbaahinta dunida, kuwa gudaha, indhaha shacabka Turkida ah, iyo guud ahaan caalamkuba waxay ahaayeen kuwo ku foogan suuqyada …